FarfallaFRC-505JE Automatic ထမင်းပေါင်းအိုး (1.8 Liters) - ငွေရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Farfalla FRC-505JE Automatic ထမင်းပေါင်းအိုး (1.8 Liters) - ငွေရောင်
ပေါင်းအိုး၊ ဆန်ခြင်ခွက်နှင့် ထမင်းခူးခပ်ရန် ဇွန်း
Teflon မျက်နှာပြင်အတွင်းသား ပါရှိသော အိုး
2017 မတျ 16
so many functions in this automatic rice cooker so that everybody can use easily and smoothly. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2016 စကျတငျဘာ 27
ဒီပေါင်းအိုးလေးက ဖန်ရှင်တော်တော်စုံပါတယ်။ သုံးရတာအဆင်ပြေသလို အရည်အသွေးလည်းကောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2016 မေ 31
makes great rice
This simple, compact cooker from Farfalla makes great rice. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Farfalla Automatic Rice Cooker သည် အချိန်ပြည့်ပူနွေးနေစေရန် စီမံထားပြီးအလိုလျောက် တိကျသေချာစွာ အပူချိန်ထိန်းညှိပေးနိုင်သောကြောင့် ချက်ပြုတ်ရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်လွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ချက်ပြုတ်မည့်အိုးမှာလည်း တူးကပ်ခြင်းများ မရှိစေရန်စီမံထားသောကြာင့် ဆေးကြောသန့်ရှင်းရလွယ်ကူမြန်ဆန်စေပါသည်။ ထမင်းချက်နေစဉ်အတွင်းမှာပင် အစားအစာများ နွှေးခြင်း၊ ပေါင်းခြင်းများလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် FRC-505JE Automatic ထမင်းပေါင်းအိုး (1.8 Liters) - ငွေရောင်